We Fight We Win. -- " More than Media ": ကာတွန်းအော်ပီကျယ်
အခု ဧပြီ ၁ ရက်၊ ည ၇နာရီခွဲအချိန်မှာ ဝန်ထမ်းအများဆုံးရှိတဲ့ နေပြည်တော်မှာကို ၄နေရာထဲက ရေတွက်ပြီးတဲ့ ၃နေရာလုံးမှာ NLD အနိုင်ရတော့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ တာဝန်ကျေမှုနဲ့ သတ္တိကို လေးစားမိလို့ ဒီကာတွန်းလေး ရေးဖြစ်တာပါ။
NLD အနိုင်ရတော့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ တာဝန်ကျေမှုနဲ့ သတ္တိကို လေးစားမိလို့ .
No,Daw Su said If u want to get change,u must do it urself.